सपनाको मोल दुई रुपैँया - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
सपनाको मोल दुई रुपैँया | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
सपनाको मोल दुई रुपैँया
by युनेश December 21, 2019
एक्लोपन र हिनताबोधले खूब सताउन थालेको यो मेरो आत्मालाई निकै गाली गर्न थालेको छु । कसैको प्रगति भइरहेको देख्दा नजानिँदो ढंगले लोभ लाग्छ । जसको प्रगति भइरहेको छ उसको नराम्रो भने म चाहान्न । आफैँले किन केही गर्न सकिनँ भन्ने कुरा सोच्दा पिर मात्र लागेको हो । तपाईंहरु आफैँ भन्नुस् त मलाई जे लागिरहेको छ त्यो भविष्यको पिर हो कि लोभ हो ?
आफ्नो मनको पिर/लोभ पोख्न म एउटा साथीलाई म्यासेज गर्छु ।
“हेर, दुनियाँमा हामीसँगैकाले कत्ति प्रगति गरिसके हामी भने जहाँको त्यहिँ । शेम् अन अस् ।”
म ‘म’ नभनेर ‘हामी’ भन्छु किनकी उसको पनि खासै प्रगति भइरहेको देखिँदैन । ऊ मलाई कत्ति कुरामा मै जस्तो लाग्छ । त्यही भएर म ऊसँग नजिकिएको हुँ । भनौँ न, हामी उस्तै देखिने समुंद्रमा ,उस्तै कस्तिमा सवार भई अलग-अलग तुफानको सामना गर्दै छौँ ।
“हाम्रो प्रगति गर्ने बेला भ[सकेको छैन नि त । “डेस्टिनी” यु नो ! सबको आ-आफ्नो डेस्टिनी हुन्छ ।” उ कत्ति सजिलै उत्तर दिन्छ ।
“तिमी त्यसो भए के गर्न चाहन्छौ त ? जिन्दगीमा अघि बढ्नु छ कि छैन ?”
हेर्नुस् त म कति स्वार्थी र पापी मान्छे रहेछु । आफूलई त हिनताबोध महशुस भएको छ नै अरुलाई पनि त्यहि महसुस गरउन चाहन्थेँ । उसले चाल पायो कि पाएन कुन्नि ? नपाएकै बेस् ।
“हेर, मलाई एकपटक उसलाई भेट्नु छ । अरु त त्यस्तै हो ।”
कस्तो सपना हो यो ? ऊ आफ्नी विछोडिएकी प्रेमिकालाई भेट्न चाहान्छ । तर किन ? सायद, ऊ आफ्नी विछोडिएकी प्रेमिकालाई फकाउन चाहान्थ्यो । हो, ऊ यहि चाहान्थ्यो । ऊ आफ्नी प्रेमिकालाई खुब माया गर्थ्यो । उसकी प्रेमिका साथ भए पनि, नभए पनि । तर त्यो मैले खोजेको उत्तर थिएन । म उसको जमिर घच्घचाउने प्रयास गर्छु र सोध्छु ।
“जिन्दगीमा हौ ! के गर्ने विचार छ ? के हो तिम्रो उदेश्य ? के हो तिम्रो सपना ?”
उसले केही त सोचेको होला नि ? आफ्नो जिन्दगीको बारेमा । भविष्यको बारेमा । सोचेको हुनपर्छ । ऊ बताउन चाहाँदैन । ऊ सायद गरेर देखाउन चाहान्छ ।
“खान, बस्न र लाउन पाए पुग्यो मलाई । सपना पूरा भयो भने पो त्यो मुल्यवान हुन्छ । पुरा नहुने सपनाको के नै पो मोल हुन्छ र ?”
केही हुल बच्चाहरु गल्लिमा खेलिरहेका छन् । सेक्काई सक्काएर छोइडुम खेल्छन् । छोइडुम सक्काएर लुकामारी खेल्छन् । लुकामारी खेलिसकेर अनि फेरी सेक्काई नै खेल्छन् । नथाकुन्जेलसम्म खेल्छन् । कसैले नबोलाउन्जेलसम्म खेल्छन् । भोक नलागुन्जेलसम्म खेल्छन् । मिले र पाएदेखी उनिहरु खेलिरहन्छन्, खेलिरहन चाहन्छन् । त्यो भीडलाई, झ्यालको ग्रिलमा चिउँडो राखेर, आँखामा, उस्तै खेल्ने सपना सजाएर हेरिरहेको हुन्छ एउटा बालकले । ऊ खेल्न जान सक्दैन किनकी उसलाई कोठामा बन्द गरिएको छ । हो, उ त्यस कोठामा थुनिएको छ । चाबी हराएर वा अचानक ढोका लक भएर उ थुनिएको होइन । उसलाई कसैले थुनेको हो । उसकै बुबाआमाले । कस्ता निर्दयी बुबाआंमा, तपाईंहरु सोच्नुहुन्छ होला । सोच्नलाई कसैले रोक्न सक्दैन । सोच्नुस्, तर माफ गर्नुहोला हजुरको सोच गलत छ । निर्दयी उनिहरु हैनन् । यो शहर हो । उनिहरु त यो शहरमा त्यही एक छोरो पढाउन आएका थिए । के गर्नु यो शहरले बलिदान माग्दो रहेछ । निद्रा र भोक माग्दो रहेछ । सबैभन्दा ठुलो कुरा त सम्झौता गराइमाग्दो रहेछ । त्यसैले, उनिहरुले पनि भोक बेचे, निद्रा बेचे, समय बेचे र सम्झौता पनि गरे । खाना नभएकालाई यो शहरले खाना दिँदैन, छत नहुनेलाई छत दिँदैन अनि दिँदैन साहारा पनि ।
यस्तो निर्दयी शहरमा के एक छाकको बारेमा सोच्नु गलत हो ? के एउटा छत जोगाउन निद्रा बेच्नु गलत हो ? उनिहरुको छोराले उनिहरुजस्तै सम्झौता नगरोस्, के यो सोच्नु गलत हो ? यदि यो सब गलत हो भने म मान्नेछु कि ति बाबुआमाले त्यो बालक थुनेर काममा जानु पनि गलत हो । काममा हिँडेका ति बुबाआमा आफु कतिखेर फर्किने त्यो टुंगो नहुँदा, त्यो बालकलाई थुन्नु गलत होइन । सँगै लिएर जान पनि सम्भव नभएकोले नै त त्यो बालक थुनिनु परेको हो । नत्र भन्नुस त कुन बुबाआमालाई आफ्ना सन्तान त्यसरी थुन्न मन लाग्छ र ? सँगै लिएर जाँदा उसका बाबुआमाले उसको ख्याल राख्थे कि काममा ध्यान दिन्थे ? अनि नथुनेर खूला छोडिदिँदा त्यो फुच्चे कतै टाढा गएर हराउला । कसैसँग झगडा गरेर पिटापिट गर्ला । भोकै पो बस्ला कि ? कुनै चुरोटेसँग रुमलिएर चुरोट नै पो तान्न थाल्ला कि ? फेरि त्यस्ता कोहि आफन्त पनि त थिएनन् जसकोमा लगेर त्यस छोरोलाई ति बाबुआमाले छोड्न सकुन् । त्यसैले त्यस समय तिनलाई जे सहि लाग्यो, तिनले त्यहि गरे । उसलाई थुनििदए । उसलाई भोक लाग्दा खाने खाजा छ, फलफुल छन् । उसलाई निंद्रा लाग्दा सुत्ने ओछ्यान छ । दिसापिसाब लाग्दा हल्का हुन भनेर राखिएको ‘पट’ छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त ऊ कोठा भित्र सुरक्षित छ ।
भित्र थुनिएको बालक उसैगरी झ्याल बाहिर खेलिरहेकाहरुलाई हेरिरहेको छ । त्यत्तिकैमा एउटा खेलिरहेको बालक झ्याल छउमा आउँछ र थुनिएको बालकलाई जिस्काउन थाल्छ । आफुसँग भएको ‘ल्याक्टो’ चकलेट निकालेर देखाउँदै खान्छ । खाइसक्छ, अनि दुईटा हात आफ्नो दुईटै कन्सिरीमा राखी जिब्रो बाहिर निकालेर थुनिएको बालकलाई जिस्काउँदै त्यहाँबाट जान्छ । थुनिएको बालक हेरिरहन्छ । उसलाई पनि त चक्लेट खान मन छ तर ऊसँग चकलेट छैन । चकलेट किन्नलाई पैसा पनि छैन । चकलेट किन्नलाई पैसा भएपनि ऊसँग आजादी छैन । बालमन न हो, उसले चकलेट किनेर खाने अठोट गर्छ । किन्तु ऊ आफ्ना बुबाआमासँग पैसा माग्न डराउँछ ।
“कागज, बोत्तल……पुरानो कापी किताब……….ए कागज बोत्तल……”
गल्लिको पल्लो कुनाबाट ठुलो आवाज आउँछ । त्यो आवाज कानमा परे लगतै उसको मस्तकमा एउटा जुक्तिले दस्तक दिन्छ । हत्तार-हत्तार उसले खाटमुनि राखिएको टिनको बाकस खोल्छ र त्यहाँ राखिएको सबै किताब निकाल्छ ।
आवाज नजिकिनछ । मतलब आवाजवाला पनि नजिकिन्छ । उसले त्यो आवाजवालालाई बोलाउँछ र अघि निकालेको किताब दिन्छ ।
“यति किताबको दुई रुपैयाँ भयो ।“ आवाजवालाले बालकलाई दुई रुपैयाँ दिन्छ । कुनै प्रतिप्रश्न नगरी बालकले सिक्का समाउँछ ।
बेलुका ढोका खुले पश्चात् ऊ कसैलाई नभनि खुर्र कुदेर पसल जान्छ र दुई रुपैयाँको चारवटा ‘ल्याक्टो’ किन्छ । भोलि त्यस जिस्काउने बालकलाई देखाई-देखाई खाने सोचले ति चकलेटलाई उसले तुरुन्तै खाँदैन । खल्तिमा राख्छ ।
भोलिपल्ट उसले त्यो बालकलाई धेरैबेर कुर्छ तर त्यो बालक आउँदैन । अन्तिममा उसले चकलेट खाने निर्णय गर्छ र खल्तिमा हात हाल्छ । चकलेट हुँदैन । आफ्नो खल्तिमा प्वाल भएको उसले चाल पाउँछ । हिजो नै ति चकलेट त्यस प्वाल भएको खल्तिबाट झरेको हुनुपर्ने अनुमान उसले लगाउँछ । आँशुहरु अनुमतिबिना उसको आँखाबाट खस्छन् । यस्तो पिडा उसले आजसम्म भोगेको थिएन । उ धेरैबेर रुन्छ । रुँदारुँदै थाक्छ र भोकाउँछ पनि । अनि उसैलाई भनेर राखिएको स्याउ खान थाल्छ । नधोई । नपखाली ।
जुन किताब त्यो बालकले बेच्यो ति उसका बुबाका थिए । कैयन चर्चित अख्यान्कारका कैयन चर्चित अख्यान थिए त्यस बेचिएको किताबको चाङमा । उपन्यास, मासिक/साप्ताहिक म्याग्जिनहरु, कथासंग्रहहरु, कवितासंग्रहहरु…..के थिएन होला त्यो चाङमा । त्यो बालकले सबै बेचिदियो, दुई रुपैयाँमा । ति किताबहरु उसका बुबाले ‘छोरा ठुलो भएर पढ्छ, ज्ञान हासिल गर्छ’ भन्ने सपना सजाएर उसैका लागि राखिदिएका किताब थिए । कत्ति खोजे बिचरा तिनले ति पुस्तकहरु । न त तिनले अचानक हराएका पुस्तक पाए न त प्रश्न गर्दा जवाफ नै । केहि समय पछि उनले पुस्तक पनि खोजेनन्, जवाफ पनि खोजेनन् । कुनै जमानामा केहि गर्छु भनि शहर छिरेका तिनलाई शहरले सम्झौता गरायो । छोराले सम्झौता गर्नु नपरोस् भनि उनले अर्को सपना सजाए । यो पटक उनकै छोराले उनलाई सम्झौता गर्न बाध्य बनायो । छोराले कयौँ पटक बाबुको सपना बेच्यो । बुबाले हरेक पटक प्रश्न गरे । पहिला जस्तै वापसमा न उनले जवाफ पाए न आफ्ना सपना नै । बुबाको सपना बेचेर किनेको आफनो सपना हरेक पटक छोराले गोजीमा हाल्थ्यो । हरेक पटक उसको गोजी च्यातिएको हुन्थ्यो । अनि हरेक पटक ऊ आफुलाई भनि राखिएको स्याउ खान मजबुर हुन्थ्यो । नधोई । नपखाली । ऊ हरेक पटक सम्झौता गर्थ्यो । जति पटक उसले सम्झौता गर्थ्यो त्यति पटक उसले आफ्नो बुबाको सपना बेच्थ्यो । कतिमा त ? सायद, हरेक पटक दुई रुपैयाँमा ।
“खान, बस्न र लाउन पाए पुग्यो मलाई । सपना पुरा भयो भने पो त्यो मुल्यवान हुन्छ । पूरा नहुने सपनाको के नै पो मोल हुन्छ र ?”
मेरो साथीले पठाएको यो म्यासेज म अघिदेखी हेरिरहेको छु । उसलाई रिप्लाई दिने सोच/मन छैन । म आफैँलाई रिप्लाई दिन्छु,
“दुई रुपैयाँ साथी । सपनाको मोल दुई रुपैयाँ हो । जुन म किन्न सक्दिनँ र किन्ने हैसियत पनि राख्दिनँ ।”
Sketch Paint by Rebeca Cross